Cool Jewels isaonline slot game from WMS and is the first game from their roster to use the exploding pays engine. The slot basically has6reels and pays all ways. You can play this game from as low as 50p per spin to as much as £200aspin. खेल पनि यस्तो निःशुल्क spins रूपमा बोनस राउंड्स विशेषताहरु, रील र wilds क्यासकेडिङशैलीपाना.
ग्राफिक्स र संगीत
सुन्दर ज्वेल्स को रील adorning अलग अलग रंग Jewels संग थोडे एक चिसो विषय छ. ग्राफिक्स बारेमा एक महान सम्झौता लेख्न साँच्चै राम्रो छैन तर अझै पर्याप्त काम बारे तिनीहरूले आफ्नो खेल प्ले अनुभव नीरस छैन बनाउन. संगीत पनि यही लाइनमा छ र बस पर्याप्त गर्छ. साँच्चै निराशा छैन तापनि तपाईं थोडे थप चाहने बाँकी छन्.
ज्वेल्स साँच्चै राम्रो मञ्चहरूमा प्रत्येक लागि अनुकूलित छ सबै मञ्चहरूमा उपलब्ध छ कि एक खेल को लागि Cool. मोबाइल फोन मा टच स्क्रीन प्रतिक्रिया ठूलो छ र पनि खेल धेरै lags वा ढिलाइ बिना बाहिर खेल्छ. यो पक्ष मा WMS देखि साँच्चै राम्रो काम.
यो Exploding मूलतः इन्जिन Pays तपाईं जंगली प्रतीक नष्ट र सबैतिर exploding गरेर रील मा तबाही wreak रूपमा जीत धेरै तरिकाहरू दिन्छ. कुनै तरिकामा खेल प्ले तपाईं प्राप्त गर्न जीत क्लासिक स्लट खेल जस्तो छ4वा मिल्ने प्रतीक बढी ठाडो वा तेर्सो पङ्क्तिबद्ध. त्यसपछि यी जादुई प्रतीक तपाईं नयाँ प्रतीक र फेरि जीत मौका प्रदान गर्न नाश छन्.
सुन्दर ज्वेल्स मूलतः एक छ5जीत धेरै तरिका संग रील स्लट खेल. तपाईं धेरै रूपमा 200 £ एक स्पिन प्रति स्पिन 50p यो खेल खेल्न सक्छन्. यो स्लट बारम्बार निरन्तर सानो जीत को धेरै संग मध्यम विचरण गर्न एक कम छ. तपाईं पनि ठूलो जीत प्राप्त छ, तर तपाईं को लागि एक सानो धैर्य छ Gotta.
यो खेल को रोमाञ्चक र तेजी देखि paced प्रकृति NetEnt गरेको Starburst को स्मरण गराउन सक्छ. वास्तवमा यी खेल दुवै विशेष गरी खेल इन्जिन को समान प्रकारको दुवै देखि खेल खेल्न अनुभव यस्तै प्रकार प्रदान.
साथै यो खेल एक मुक्त spins बोनस जब तपाईं परित्याग हुनेछ ट्रिगर जो छ 8 मुक्त spins. यो वास्तवमा जब रूपबाट4वा बोनस प्रतीक बढी नाश छन्.